သင့်ရဲ့ ANDROID အပေါ် FONT ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန် - အရင်ကဆိုရင်များအတွက် - 2019
အန်းဒရွိုက်ရိုးရှင်းသော Widgets နဲ့အပြင်အဆင်များနှင့်ပြီးခဲ့သည့် Third-party launcher နှင့်အတူစတင်အသုံးပြုသူများ interface ကိုစိတ်ကြိုက်လုံလောက်သောအခွင့်အလမ်းများပေးသည်။ သငျသညျကို Android ပေါ်အင်တာဖေ့စဖောင်နှင့် applications များပြောင်းလဲပစ်ရန်ဖြစ်လျှင်သို့သော်ဒီဇိုင်းအချို့ရှုထောင့်ကို configure ဥပမာ, ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ဤဖြစ်နိုင်သောစေရန်နှင့်ဖုန်းများနှင့် tablet အချို့မော်ဒယ်အဘို့ - အလွန်ရိုးရှင်းပြီး။
(အချို့ကိစ္စများတွင်လိုအပ်မည်အကြောင်းအရာ) ကို root-access ကိုမပါဘဲအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေနဲ့သင့်ရဲ့ Android စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ပေါ်မှ font ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံဤအညွှန်ကြားချက်အသေးစိတ်။ သီးခြားစီက Samsung Galaxy အပေါ်စာလုံးတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အဘို့, ပြီးတော့ - - ထိုလက်စွဲစာအုပ်ရဲ့အစမှာအကြောင်းကိုအပေါငျးတို့သညျအခွားစမတ်ဖုန်းများ (က Samsung အပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ကြိုတင် 8.0 Oreo မှအန်းဒရွိုက်၏ဗားရှင်းနဲ့) ။ ။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: Windows 10 ကို၏ font ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို။
Samsung ကဖုန်းများပေါ်တွင်စာလုံးကိုပြောင်းနှင့်ဖောင့်ကို install
Samsung ကဖုန်းများအဖြစ်အချို့သော LG ကနှင့် HTC မော်ဒယ်များကတော့ font ကို setting များကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ထို option ရှိသည်။
သဖြင့် Samsung Galaxy ပေါ်တွင်စာလုံး၏ရိုးရှင်းသောပြောင်းလဲမှုများအတွက်, သငျသညျကိုအောက်ပါအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါနိုင်ပါတယ်
Setting ကိုသွားပါ - ဖော်ပြပါ။
"ဟုအဆိုပါစကေး font နဲ့ဖော်ပြရန်။ " ကိုရွေးချယ်ပါ
အောက်ခြေတွင်စာလုံးကို select, ပြီးတော့သူကလျှောက်ထားဖို့ "Finish ကို" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ထိုခဏခြင်းတွင်ရှိနောက်ထပ်ဖောင့်ကိုထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ "ဒေါင်းလုပ်ဖောင့်" ကို select, ဒါပေမဲ့သူတို့ (က Samsung Sans မှလွဲ. ) အားလုံးတွေဟာပေးဆောင်နေကြပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေပတ်လည် get နှင့် ttf font ကိုဖိုင်တွေအပါအဝင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖောင့်, သတ်မှတ်ထားဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဗားရှင်းအန်းဒရွိုက် 8.0 Oreo Fonts FlipFont (သူတို့က Samsung အပေါ်အသုံးပြုကြသည်) အွန်လိုင်းတွေ့နိုင်ပါသည်နှင့် APK ကို၏ပုံစံကို download သူတို့က setting တွင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်ဖောင့်ကိုစနစ်တကျ install အလုပ်လုပ်ခဲ့: ဖုန်းများကို Samsung ရဲ့ Galaxy အပေါ်သူ၏ဖောင့် setting မှအတော်ကြာချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ် iFont applications များ ( "အခြား Android ဖုန်းများ" အပေါ်အပိုင်းတွင်ထပ်မံဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မည်) ကိုသုံးနိုင်သည်။
သငျသညျကို Android7ကို run နေတဲ့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ဗားရှင်းအဟောင်းကိုရှိပါကသင်ဆဲကဤနည်းလမ်းအားလုံးကိုသုံးနိုင်သည်။ သငျသညျကို Android 8 သို့မဟုတ်9နှင့်အတူသစ်တစ်ခုစမတ်ဖုန်းရှိပါက၎င်း၏ဖောင့်ကို install လုပ်ဖို့ပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန်ကိုရှာရပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ထဲမှတစ်ဦး, (က Galaxy Note ကို9ရက်နေ့ကစမ်းသပ်ပြီး) ကအလွယ်ကူဆုံးနှင့်စစ်မှန်သောအချိန်ပေါ်အလုပ်လုပ် - Play Store ရှိရရှိနိုင် ThemeGalaxy လျှောက်လွှာများအသုံးပြုခြင်း: //play.google.com/store/apps/details?id=project.vivid.themesamgalaxy
ပထမဦးစွာဤလျှောက်လွှာများအခမဲ့ဗားရှင်း၏အသုံးပြုမှုကို font ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်:
လျှောက်လွှာကို install ပြီးနောက်သင် icon နှစ်ခုရှိတယ်စာရင်းလိမ့်မည်: အဓိကအကြောင်းအရာက Galaxy နှင့်ပုဂ္ဂလိကဖွင့်ဖို့ - "Themes" ။ ပထမဦးစွာယင်းအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာက Galaxy application ကိုသူ့ဟာသူစတင်ရန်လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်ပေး, အဲဒီနောက် "Themes" ကို run ။
သည် "Fonts" ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်အစား "အားလုံး" ၏ထောင့်တွင်သာရုရှားဖောင့်ပြသနိုင်ရန်အတွက် "Cyrillic" ကိုရွေးချယ်ပါ။ Google က Fonts ကနေရရှိနိုင်အခမဲ့ဖောင့်စာရင်းပါ။
"Download" နှင့်ဒေါင်းလုပ်ပြီးနောက် Click - "။ နယူးစာလုံး Install"
သင့်ရဲ့ဖုန်းကို restart ချလိုက်ပါ (Android ကို Oreo နှင့်အသစ်များစနစ်များကိုမှ Samsung ကိုလိုအပ်ပါတယ်) ။
အဆိုပါ font ကိုဖုန်းရဲ့ setting များ (- Display ကို - စာလုံးနှင့်မျက်နှာပြင်စကေးက Settings) တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာအစလျှောက်လွှာ (အင်တာနက်ပေါ်ရှိ download ပြုလုပ်ဖောဖောသီသီရရှိနိုင်သော) ကိုယ်ပိုင်တဲ့ TTF font ကို install လုပ်ခွင့်ပြုပေမယ့် function ကို (99 ဆင့်, တဦးတည်း-အချိန်အနည်းဆုံး) ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်:
app ကိုအဓိကအကြောင်းအရာက Galaxy စတင်ရန်, မီနူး (မျက်နှာပြင်ရဲ့ဘယ်ဘက်အစွန်ကနေပွတ်ဆွဲ) ဖွင့်လှစ်။
"Extras" ကိုအောကျမီနူးထဲမှာ ".ttf သင့်ရဲ့ font ကို Create" ကိုရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျပထမဦးဆုံး function ကိုသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားကြတဲ့အခါမှာသင်ကမဝယ်ဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်။
(က setting တွင်စာရင်းထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဖြစ်), ပု font ကိုအမညျကိုရှေးခယျြမှာ "ကိုယ်တိုင် .ttf ဖိုင်ကို Select" နှင့်သင်၏ဖုန်းတွင်ဖောင့်ဖိုင်၏တည်နေရာကိုသတ်မှတ်ကို select (သင်လည်းအနေဖြင့်ဖောင့်ကိုဒေါင်းလုဒ် themeGalaxy / ဖောင့်ဖိုင်တွဲ / ထုံးစံ / နှင့်အထိမ်းအမှတ် "အတွက်ဖောင့်ဖိုင်တွေဖွင့် add နိုင်ပါတယ် ထုံးစံဖိုလ်ဒါ။ "
"Create" ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုခဏခြင်းတွင်တည်ထောင်ပြီးနောက် font ကိုတင်ထားရန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
(သာအန်းဒရွိုက်၏အသစ်များဗားရှင်းအတွက်) သင့်ရဲ့ဖုန်းကို restart ချလိုက်ပါ။
အဆိုပါဖောင် setting များကိုထဲမှာဖော်ပြပါတယ်နှင့်သင့်ကို Samsung interface ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Samsung ကအပေါ်စာလုံးတွေ install ဖို့ဘယ်လိုသိနောက်ထပ်လျှောက်လွှာ - AFonts ။ Oreo တွင်ကိုလည်းပြန်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်, ဝယ်ယူ function ကိုမရှိ, ရုရှား fonts directory လိုအပ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဖောင့်ဖန်တီးပါ။
အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းသစ်များနှင့်သင်၏ Samsung ရဲ့ Galaxy အပေါ်စာလုံးတွေကို install ၏အပိုဆောင်းနည်းလမ်းများဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်: //4pda.ru/forum/index.php?showtopic=191055 (။ "လို့ Samsung ရဲ့ Android 8.0 Oreo များအတွက် Fonts ကိုကြည့်ပါ) Substratum / သုံးပြီးတစ်နည်းလမ်းလည်းရှိပါသည်။ Andromeda အဘယျအကဒီမှာ (အင်္ဂလိပ်လို) ကိုဖတ်စေနိုင်သည်။
အဘယ်သို့ငါသည်အခြားထုတ်လုပ်သူများထံမှကို Android ဖုန်းများနှင့် tablet များပေါ်တွင်စာလုံးကိုပြောင်းပါဘူး
အများဆုံး Android စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet display ကို font ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အဘို့အအမြစ်-access ကိုလိုအပ်သည်။ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်: ဥပမာ, iFont application ကိုအောင်မြင်စွာအဟောင်းတွေ Samsung နှင့်အခြားဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်ပေါ်နှင့်ရုသသည်မပါဘဲဖောင့်ကထပ်ပြောသည်။
iFont - Google ကရရှိနိုင်မယ့်အခမဲ့ app ကို Store ကို //play.google.com/store/apps/details?id=com.kapp.ifont Play, အမြစ်-access ကိုအတူဖုန်းပေါ်မှာသင့်ရဲ့ဖောင့် (အဖြစ်အခမဲ့ဖောင့်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်မရရှိနိုင်ပါ) ကိုတင်ထားရန်လွယ်ကူစေသည် အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီအမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းများ (Samsung, Xiaomi က, Meizu, Huawei က) မပါဘဲ။
Install လုပ်ပြီး run လျှောက်လွှာ (မလိုအပ်ပါလျှင်, အမြစ်-access ကိုပေး), အ tab ကိုဖွင့်လှစ် "ရှာရန်", ထို့နောက် - "အားလုံး Fonts" - "ရုရှား" ။
လိုချင်သောစာလုံးကိုရွေးချယ်ပါနှင့် "ဒေါင်းလုပ်" နှင့်ဒေါင်းလုပ်ပြီးနောက်ကို click - က "Install" ။
တပ်ဆင်ပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏ဖုန်းကို restart ပြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖောင့်တင်ထားရန်, ဖိုင်တွဲ .ttf မှဖိုင်များကိုကူးယူ "iFont / ထုံးစံ /", ထို့နောက် "ကျွန်မ" ဟုအဆိုပါပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကလစ်လုပ်ပါ - "ငါ့ Fonts", သင် install လုပ်လိုသောစာလုံးကိုရွေးချယ်ပါ။
ငါ၏အစမ်းသပ်မှုများတွင် (အမြစ်-access ကိုအတူ Lenovo က Moto ဖုန်း) အရာအားလုံးကိုဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်တချို့ bug တွေနှင့်အတူ:
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖောင် ttf သတ်မှတ်ထားဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါလှူဒါန်းမှုလျှောက်လွှာရေးသားသူအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်အဆိုပြုချက်ကိုနဲ့ window ကိုဖွင့်လှစ်။ တပ်ဆင်ပိတ်ပြီးနှင့်ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်အောင်မြင်သော applications များဖြစ်ပါတယ်။
အခမဲ့ catalog iFont ကနေအားလုံး installed font တွေကိုဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်သည်အထိပြီးတာနဲ့တပ်ဆင်ယင်း၏ဖောင် .ttf အလုပ်လုပ်ခဲ့မထားပါဘူး။ ဖောင့်, "My" tab ကိုအပေါ်ဖြစ်ကို My Downloads ဖွင့်အထက်ညာဘက်ထောင့်ရှိ "အမှိုက်" ပေါ်တွင်စာသားနဲ့ကလစ် နှိပ်. ရွေးချယ်ခြင်းနိုင်ပါတယ်ဖယ်ရှားပါ။
လိုအပ်သောလျှင်, default အနေနဲ့ font ကိုပွင့်လင်း iFont application ကိုပြန်သွားပါ "ကြှနျုပျ၏" နှင့် "ကြိုတင်ပြင် font ကို" ကိုနှိပ်ပါသွားပါ။
အလားတူအခမဲ့ app ကို - FontFix ။ ငါ၏အစမ်းသပ်မှုများတွင်လည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်တချို့အကြောင်းပြချက်များအတွက်, ရွေးချယ်ပါ (interface ကိုမ element တွေအားလုံးကို) ဖောင့်ကိုပြောင်းလဲ။
အထက်အပေါငျးတို့သရွေးချယ်စရာဖောင့်ကိုပြောင်းလဲဖော်ပြရန်ပါဘူး, ဒါပေမယ့် interface ကိုတလျှောက်လုံးစာလုံးကိုပြောင်းလဲရန်သာသူများအဖြစ်အဆိုပါအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများအတွက်အတော်လေးလုံခြုံ။ သို့သော်နောက်ထပ်နည်းလမ်းများရှိပါသည်:
အမြစ်-access ကို၏ရှေ့တော်၌ - စနစ်ဖောင်ဖိုင်တွေ Roboto-Regular.ttf ၏အစားထိုး, Roboto-Bold.ttf, Roboto-Italic.ttf နှင့်စနစ်၏ Roboto-Bolditalic.ttf / စာလုံးတွေတူအမည်များနှင့်အတူအခြားအဖောဖိုင်များကိုဖိုင်တွဲ။
စာလုံးဆက်တင်များ (ဥပမာ, Apex Launcher ကို, Go ကိုဖွင့်တင်) နဲ့ launcher ကိုသုံးပါ - ထို interface ကိုတလျှောက်လုံးစာလုံးပြောင်းလဲပစ်ရန်မလိုအပ်လည်းမရှိပါ။ ။ Android အတွက်အကောင်းဆုံး launchers ကိုကြည့်ပါ။
သငျသညျ devices များသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖြစ်ကောင်းသက်ဆိုင်သောဖောငျ့, ကိုပြောင်းလဲဖို့နဲ့အခြားနည်းလမ်းတွေထဲကသိလျှင်သင်မှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုဝေမျှမယ်ဆိုရင်ငါကျေးဇူးတင်ကြလိမ့်မည်။
ဗီဒီယို Watch: 10 minutes silence, where's the microphone??? (အောက်တိုဘာလ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © အရင်ကဆိုရင်များအတွက် 2019